Sacuudiga oo ogolaaday Codsiga Xuuthiyiinta ku xireen wadahadalka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Sacuudiga oo ogolaaday Codsiga Xuuthiyiinta ku xireen wadahadalka
November 13, 2018 - By: Abdirizak Shiino
Waxaa la filayaa in dhawaan dib loo bilaabo wadahadalkii nabadeed iyo dhex dhexaadinta Xulafada Sacuudiga iyo Xoogaga Xuuthiyiinta ee Yemen ka dagaalamaya.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee UK Jeremy Hunt oo booqasho ku tagay Boqortooyada Sacuudiga iyo Imaaraatiga ayaa sheegay in dhinaca Sacuudiga ay aqbaleen mid kamid ah qodobadii xuuthiyiinta ku xireen in wadahadalka bilowdo.
Xuuthiyiinta ayaa codsanayey in maleeshiyaadkooda dhaawac ah loo qaado dalka Cumaan si loogu soo daaweeyo.
Sacuudiga ayaa sheegay inay hada ogolaadeen in dhaawaca Xuuthiyiinta la qaado, tilaabadan oo ay ku dhiiri gelinayaan in wadahadalka furmo, sidaa waxaa sheegay Wasiirka UK oo kulamo la yeeshay Maxamed bin Salman iyo hogaamiyaha imaaraatiga Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Go’aanka Sacuudiga ayaa kusoo beegmaya xili uu cadaadis xoogan saaran yahay Boqortooyadaasi kadib dilkii suxufi Jamal Khashoggi oo 2dii Oktoober lagu dhex dilay qunsuliyadooda Istanbul, waxaa sidoo kale baaq laga soo saarayaa xaalada halista ah oo ay shacabka yemen xiligan ku sugan yihiin.
Xulafada Sacuudiga ayaa maalmihii lasoo dhaafay dar dar geliyey duulaanka ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada Xudeydah ee dekkadaleh, qorshahaasi militari oo ah in xulafada la wareegto gacan ku heynta dhulkaasi kahor intaan wadahadalka furmin.
Wadahadalka Xuuthiyiinta iyo Xulafada Sacuudiga ayaa horey u baaqday bishii September oo la filayey inuu shirkaasi ka furmo magaalada Geneva, balse shirkaasi ayaa burburay kadib markii ay imaan waayeen wafdiga ka socda Xuuthiyiinta oo loo fulin waayey sharuudaha ay ku xireen wadahadalka.
Sadexda Shardi oo ay Xuuthiyiinta ku xireen wadahadalka ayaa ahaa in maleeshiyaadkooda dhaawaca ah loo qaado dalka Cumaan, kuwa kale ee Cumaan ku sugana loo ogolaado inay kusoo noqdaan dhulkooda iyo in wafdiga Xuuthiyiinta ee wadahadalka u qaabilsan loo ogolaado inay Sanca kusoo noqdaan kadib wadahadalada.